Wassiir Bayle Canshuurta waa in labixiyaa +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wassiir Bayle Canshuurta waa in labixiyaa +COD
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa sheegay in qaadista canshuurta iibka ee alaabooyinka jumlada ah ay muhiim u tahay shaqada dawladda iyo dhismaha kalsoonida lagu qabo dawladda.
Beyle, wareysi uu siiyey idaacadda VOA ayuu ku sheegay in dawladdu ay ka shaqaynayso midaynta guud ahaan canshuuraha dalka, shirar arrintaas khuseeyana ay socdaan. Canshuurta iibka ee ay dhowaan soo rogtay dawladda ayaa waxaa ka ka hor-yimid ganacsatada oo ku dooday inay badan tahay, waxayna ganacsatadu sameeyeen shaqo joojin iyaga oo xiray goobihii ganacsiga labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
Cabdiraxmana Ducaale Bayle waxa uu waraysigan ku sheegay in lacagta laga doonayo ganacsatada ay tahay waajib dawli ah oo ku qoran sharciyada waddanka. Waxaa dhinaca kale uu sheegay in dawladda Soomaaliya laga doonayo inay kasoo baxdo waajibaadkeeda saaran gudaha iyo dibedda sida inay bixiso mushaharaadka iyo inay sidoo kale guddo qaanta lagu leeyahay.
Waxa uu sheegay in bixinta canshuurta la’aanteed aysan dawladda Soomaaliya awoodi doonin inay iska bixiso kharashaadka ku baxa maamulka hawlaha dawladda. Waxaa sidoo kale uu wasiirku ka hadlay halka ay marayaan lacigihii ay dawladdu horey u sheegtay inay soo daabacayso.
Waraysiga oo dhammaystiran hoos ka dhagayso qeybtan hoose.